Nhau - yekubatanidza hunyanzvi uye dhijitari tekinoroji simba
Parizvino, shanduko yedhijitari yave chibvumirano chemabhizinesi, asi takatarisana neiyo tekinoroji yedhijitari isingaperi, maitiro ekuita iyo tekinoroji kutamba mukana wakakura kwazvo munzvimbo yebhizimusi rebhizimusi chirahwe uye dambudziko rakatarisana nemamwe mabhizinesi. Panyaya iyi, panguva ichangopfuura ye2020 Schneider Electric Innovation Summit, mutori wenhau akabvunzurudza Zhang Lei, mutevedzeri wemutungamiri weSchneider Electric uye mukuru webhizimusi rebasa redhijitari kuChina.
Zhang Lei (wekutanga kubva kuruboshwe) kumusangano wekutenderedza we "mubatanidzwa mutsva uye kugonesa kwetekinoroji"
Zhang Lei akati mukushandurwa kwedigital, mabhizinesi anowanzo sangana nematambudziko makuru matatu. Kutanga, mazhinji mabhizinesi kushayikwa kwepamusoro-danho dhizaini mukushandurwa kwedhijitari, havazive chikonzero chekuita digitization, uye usafunge zvizere nezve kukosha chaiko kweDigitalization yekushanda kwebhizinesi. Chechipiri, mabhizinesi mazhinji haasanganise dhata nemamiriro ebhizinesi, uye haamise ongororo kugona, izvo zvinoita kuti data rikundikane kuve ruzivo runotsigira kutora sarudzo. Yetatu, inofuratira chokwadi chekuti maitiro ekushandurwa kwedhijitari zvakare maitiro ekuchinja kwesangano.
Zhang Lei anotenda kuti kuitira kugadzirisa nyonganiso yemabhizimusi mukushandurwa kwedhijitari, kuwedzera kune iyo tekinoroji tekinoroji uye kugona, inodawo kutenderera kuzere uye yakanatswa masevhisi edhijitari.
Seye musoro webasa redhijitari sevhisi, Schneider Electric's dijitari sevhisi inonyanya kuve nematanho mana Yokutanga ndeyekubvunza sevhisi, iyo inobatsira vatengi kuti vazive zvavanoda uye kuti ndeapi matambudziko aripo mubhizinesi rebhizinesi. Yechipiri ndeyekuronga zvigadzirwa. Mune ino sevhisi, Schneider Electric ichashanda nevatengi kuronga zvemukati zvebasa, kuona kuti ndeipi mhinduro inonyanya kukodzera, inoshanda zvakanyanya uye inogadzikana, batsira vatengi kusarudza zvinogoneka uye zvakakwana zvehunyanzvi mhinduro, kupfupisa kuyedzwa uye kukanganisa kutenderera, uye kudzikisa mari isingakoshi. Chechitatu ndechekuongorora kugona kugona sevhisi, iyo inoshandisa ruzivo rwehunyanzvi rweSchneider magetsi maindasitiri nyanzvi, inosanganiswa nedata revatengi, kuburikidza nekunzwisisa kwedata, kubatsira vatengi kuongorora matambudziko. Yechina iri pane-saiti sevhisi. Semuenzaniso, ipa yekuisa pasuo nesuo, kugadzirisa dambudziko uye mamwe masevhisi ekuchengetedza michina iri munzvimbo yakanaka yekushanda kwenguva refu.
Kana zvasvika kune se-saiti sevhisi, Zhang Lei anotenda kuti kune vanopa rubatsiro, kunyatso kubatsira vatengi kugadzirisa matambudziko, ivo vanofanirwa kuenda kunzvimbo yevatengi uye kutsvaga matambudziko ese ari panzvimbo, senge hunhu hwezvigadzirwa zvinoshandiswa mukati. munda, chii chimiro chesimba, uye ndeipi nzira yekugadzira. Ivo vese vanofanirwa kunzwisisa, kugona, kutsvaga nekugadzirisa matambudziko.
Mukuita kwekubatsira mabhizinesi kuti aite shanduko yedigital, vanopa rubatsiro vanofanirwa kuve nekunzwisisa kwakasimba kwese tekinoroji uye zviitiko zvebhizinesi. Kuti izvi zviitike, vanopa rubatsiro vanofanirwa kushanda nesimba mukuumbwa kwesangano, bhizinesi modhi uye kudzidziswa kwevashandi.
“Muhurongwa hwesangano reSchneider Electric, tinogara tichikurudzira nekusimbisa musimboti wekubatanidzwa. Kana tichitarisa chero dhizaini yekugadzira uye hunyanzvi hwetekinoroji, tinofunga madhipatimendi ebhizinesi akasiyana pamwechete, "akadaro Zhang. Isa mabhizinesi akasiyana uye zvigadzirwa mitsara pamwechete kuti uite hwaro hwese, uchitora mamiriro ese mukutarisisa. Uye zvakare, isu tinonamatira kwakakura kwazvo kurimwa kwevanhu, tichitarisira kushandura munhu wese kuita matarenda edhijitari. Isu tinokurudzira vatinoshanda navo vanoita software uye Hardware kuti vave nekufunga kwedhijitari. Kubudikidza nekudzidziswa kwedu, tsananguro yechigadzirwa uye kunyange kuenda kunzvimbo yevatengi pamwe chete, tinogona kunzwisisa zvinodiwa nevatengi mundima yedhijitari uye nemabatiro atingaita nezvinhu zvedu zviripo. Tinogona kukurudzira uye kubatana pamwe nemumwe. ”
Zhang Lei akataura kuti mukushandurwa kwedhijitari shanduko, nzira yekuzadzisa chiyero pakati pezvakanaka nemitengo inyaya yakakosha. Dhijitari sevhisi haisi pfupi-yenguva sevhisi maitiro, asi -refu-kwenguva maitiro. Iyo inoenderana nehupenyu hwese kutenderera kwemidziyo, kubva pamakore mashanu kusvika gumi makore.
"Kubva padanho iri, kunyangwe paizove nemari yekudyara mugore rekutanga, mabhenefiti anozoonekwa zvishoma nezvishoma muchirongwa chose chekuenderera mberi kwekushanda. Uye zvakare, mukuwedzera kune zvakananga mabhenefiti, vatengi vanowanawo mamwe akawanda mabhenefiti. Semuenzaniso, ivo vanogona kutsvaga mutsva bhizinesi modhi kuti zvishoma nezvishoma vashandure yavo bhizimusi bhizinesi kuita riwedzere bhizinesi. Isu takawana mamiriro aya mushure mekubatana nevazhinji vatinoshanda navo "Zhang Lei akadaro. (chinyorwa ichi chinosarudzwa kubva mune zvehupfumi mazuva ese, mutori wenhau yuan Yong)